सुरज डिजी खनाल शनिबार, माघ २६, २०७५
नेता कार्कीले नेपाली पब्लिकसँगको कुराकानीमा भने,‘कांग्रेस कुन पार्टी हो ? कस्तो पार्टी हो ? जनताले चिनेका छैनन् र ? देशमा जारी अत्याचारलाई सुनाउनको लागि कि कांग्रेसलाई जिस्काउनु पर्ने हो र ?’ यस्ता पवित्रि र चरित्रले मुलुक स्थायी रुपमा विकासको बाटोमा हिड्दैन, वैज्ञानिक समाजवाद अपरिहार्य छ ।’ त्यस्तै कार्कीले सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल, धुर्मुस सुन्तुतीहरुलाई पनि व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
उत्तर - कांग्रेसलाई कसले सुत भन्या छ र ?
उत्तर - यिनै नेताले बनाउन सक्दैनौं भन्दा हुन्थ्यो ।
उत्तर - जनताले नबनाएको विश्वको एउटा अर्को चिज देखाउनुस् त ?’
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २६, २०७५ ०८:४४